Plastic muforoma jekiseni Kuumbwa kuenderana nemafambiro ekuvandudza mune ramangwana - Aojie Mould Co., Ltd.
Mon - Sat pa7: 00 AM kusvika 9:00 AM
Auto Zvikamu Mould
Industrial Zvigadzirwa Mould
Mhuri Zvigadzirwa Mould
Midhudhudhu & Scooter Mould
Musangano & Zvishandiso
Muforoma Maitiro Kuyerera
Mold Kuongorora Kuyerera Chati
Plastic muforoma jekiseni Kuumbwa kuenderana zvinoitika kukura mune ramangwana
Zvino maitiro enzanga, kukura kweforoma kuri kukurumidza kwazvo. Plastic muforoma jekiseni kugadzira inonyanya kudiwa nevanhu. Pasi petarisiro yemusika, iro ramangwana rinogona kutarisirwa. Shandong Zheng's Plastic Mould Factory inoenderana nekuvandudzika kwenguva, uye tekinoroji yayo iri kuvandudza nekukurumidza.
Mamiriro ezvinhu aripo ekukura kwejekiseni muforoma mamiriro ezvinhu eichi chigadzirwa mamiriro epurasitiki muforoma indasitiri akasangana neinopfuura hafu yezana ramakore, uye akaita fambiro mberi huru. Mune hombe muhombe, takaburitsa 48 Inch hombe skrini yemapurasitiki goko jekiseni muforoma, 6.5kg yakakura yekuwachisa muchina, izere mapurasitiki muforoma, pamwe nemota bhamba uye yakakosha yedashboard dhibhodhi muforoma. Nezve kunyatso kuumbwa kwepurasitiki, isu takakwanisa kuburitsa zvikamu zvepurasitiki uye kuumbwa kwemakamera. Mhango diki module giya muforoma uye mapurasitiki muforoma.
Parizvino, inopisa mumhanyi chakuvhuvhu yave zvishoma nezvishoma dzakakurumbira, uye anopfuura 20% rave kushandiswa mune mamwe mafekitari. Ivo vanowanzo shandisa kupisa kwemukati kana kwekunze kupisa unopisa mumhanyi michina, pamwe neepamberi yepasi nhanho yeyakaoma tsono vharuvhu inopisa mumhanyi michina. Yepamberi nhanho yepasi yeyero vharuvhu inopisa mumhanyi muforoma. Nekudaro, iyo yekumisikidzwa mwero weanopisa mumhanyi kazhinji iri pasi pegumi muzana, izvo zvakasiyana zvakanyanya neiyo ye50% kusvika 80% kunze kwenyika.
Iko kushandiswa kweCAD / CAE / CAM nekukurumidza kukurumidza kwechiedza indasitiri uye kugadzira mota, dhizaini dhizaini kwave kunetsekana zvakanyanya, uye kuumba indasitiri. Nekudaro, China yeforoma indasitiri kushayikwa kwevashandi vehunyanzvi, zvakasiyana, zvakanyatsojeka, ipfupi yekugadzira kutenderera, hupenyu hupfupi, kushomeka. Humwe hukuru, hwakaomarara uye hwakaoma kuumbwa haigone kugadzirwa pachavo. Zvinotora mamirioni uye makumi emamirioni emadhora kupinza kubva kunze kwenyika gore rega, izvo zvinokanganisa kukura kweiyo indasitiri yeforoma. Naizvozvo, zvakakosha kukudziridza chakuvhuvhu indasitiri. Kuti uvandudze dhizaini dhizaini uye kugadzirisa kugona kweforoma mabhizinesi. Iyo CAD / CAE / CAM system inokurudzirwa neChina Die & mold kushamwaridzana yakakodzera kune Die & Mould Kambani uye yenyika kufa & mold indasitiri.
Iyo CAD / CAE / CAM sisitimu yeforoma dhizaini uye machining haidi yakakura kwazvo sisitimu, asi inoda zvakakwirira zvinodiwa mune zvimwe zvinhu, senge pamusoro pekuenzanisira uye matatu-akabatana CNC machining. Kunyangwe mamwe masisitimu eCAD / CAE / CAM ekune dzimwe nyika aine mabasa ane simba ekumisikidzwa kwepamusoro pe3D, mamiriro ekugadzirisa ongororo, makompiyuta-anobatsira kugadzira uye chigadzirwa data manejimendi, anodhura uye akaoma kutakura kumakambani akajairika.
Plastiki muforoma jekiseni kuburitsa chiteshi kumberi kwekuvandudzika kwenguva, mune yekuvandudza maitiro emhepo, ramangwana rinogona kutarisirwa.
Aojie Mould Co., Ltd.